Ukulungisa ukuxhumeka kwesihlahla kwehlulekile (NT_STATUS_ACCESS_DENIED) iphutha elivela ku-CUPS | Kusuka kuLinux
Ukulungisa ukuxhumeka kwesihlahla kwehlulekile (NT_STATUS_ACCESS_DENIED) iphutha kusuka ku-CUPS
Isimo simi kanje: Endaweni engisebenza kuyo kunefayela le- Isilawuli Sesizinda amanye ama-PC asebenzisa iWindows. Enye yalezi PC ifakiwe Windows 2000 futhi inhloso yayo kuphela ukwabelana ngephrinta I-Epson LX 300+ «Yebo, isiqeshana semnyuziyamu.
Into ukuthi, bengidinga amaklayenti asebenzisayo Ubuntu 12.04 ingasebenzisa iphrinta ngenethiwekhi.
Ngivula iwizadi yokumisa iphrinta (system-config-printer) futhi ngilungiselela iphrinta ngenethiwekhi.
Ngifaka i-IP ye-PC ehlanganyela iphrinta, ngiyinika i-Search futhi iphelele, ithola iPrinta.
Ngemuva kwalokho ingicela ukuthi ngisebenzise iDrayivu, ngakho-ke ngifuna i-Epson, bese ngifunisisa iLX 300+.
Futhi ngomumo. Lapho iphrinta isimisiwe, sengizophrinta ikhasi lokuhlola lapho ngokungazelelwe kube nephutha elincane elihle.
Ukuxhuma kwesihlahla kuhlulekile (NT_STATUS_ACCESS_DENIED)
Ngasho kahle, ukusesha i-Intanethi ... ngakho-ke ngiphequlula lapha nalaphaya ngathola ikhambi. Ngalesi sibonelo engizosisebenzisa njenge-Domain: DESDELINUX, negama lomsebenzisi nephasiwedi: izinga y kusuka ku-linux ngokulandelana.
Umsebenzisi we-elav unamalungelo okuphatha ku-Windows PC. Angizange ngivivinye ngomsebenzisi ojwayelekile
Sihlela ifayela /etc/samba/smb.conf:
# Shintsha lokhu kuqembu lomsebenzi / igama lesizinda se-NT isiphakeli sakho seSamba sizoba yingxenye yeqembu lomsebenzi = UMSEBENZI
Futhi sikushiya ngale ndlela elandelayo:
# Shintsha lokhu kuqembu lomsebenzi / igama lesizinda se-NT isiphakeli sakho seSamba sizoba yingxenye yeqembu lomsebenzi = DESDELINUX
Ngemuva kwalokho sihlela ifayili /etc/cups/printers.conf, lapho idatha yephrinta esiyilungisile okufanele igcinwe khona. Sifuna umugqa othi:
futhi sikushiya kanjena:
Siqala kabusha i-CUPS
Futhi ngomumo. Sesingakwazi ukuphrinta.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ukulungisa ukuxhumeka kwesihlahla kwehlulekile (NT_STATUS_ACCESS_DENIED) iphutha kusuka ku-CUPS
Ngiyabonga kakhulu, kusebenza kahle, impela ngikwenze e-Opensuse, ukumiswa kufana ncamashi, ama-matrices akude nokunyamalala, inqobo nje uma kunezinkampani ezikhokhisa amahlandla ama-2 noma ama-3 ngenyanga, ngoba i-invoyisi kagesi iyinkimbinkimbi kakhulu ngezindleko maqondana nenani elikulethile empeleni.
Ukubingelela nokubonga ngethiphu.
Amaphrinta we-matrix we-dot kumele abe yiwona ahamba phambili eCuba, awadingi uyinki, amaribhoni ahlala ingunaphakade.
Haha awazi lutho, futhi lapho itheyipu iphela, sisebenzisa iphepha lekhabhoni ..
Kuyinto eyisisekelo ukufunda i-smbclient syntax yokufunda ukubhala ama-URIs nokuxazulula inkinga ngamaphutha we-Samba. Ngincoma ukuthi ufunde yonke imanuwali.
Inkinga yakho bekungukuthi uma ungacacisi umsebenzisi ku-URI, izama ukungena njengesihambeli (noma isivakashi) ngaphandle kwephasiwedi, futhi esizindeni cishe akunakwenzeka ukukuvumela lokhu. Kuthiwani uma ngincoma ukuthi udale umsebenzisi anamalungelo kuphela ephrinta ye-PC ephethe iphrinta ngoba ukusebenzisa idatha yomlawuli ukuphrinta kuphela kuyingozi enkulu yezokuphepha printers.conf bese uzama kalula igama lomsebenzisi nephasiwedi yomlawuli wesizinda)
Siyabonga ngethiphu ye-eVeR. 😉
Kungani ushintsha igama leqembu lomsebenzi kumshini we-Ubuntu? Ingabe lelo yigama onalo kukhompyutha yakho ye-Windows?
Ngoba ngingenela ngenethiwekhi elawulwa yisizinda. Uma ngishiya i-WORKGROUP, umsebenzisi engifinyelela naye iphrinta akasebenzi.
Ukubona le ncwajana, yona uqobo ilusizo kakhulu, futhi ehlobene nombuzo wokusetshenziswa kwesamba, ngivivinya uManjaro. Ukusatshalaliswa okuhle kakhulu, kepha esimweni se-samba kuza ngaphandle kokulungiswa kwangaphambili ukuthi ubuntu, i-mint kanye ne-derivatives abanayo.
Inkinga yokwabelana ngamafolda, amaphrinta namadivayisi eqenjini lomsebenzi inzima kakhulu. Ukube bekukhona umuntu ofundisayo, noma othile oxazulule le nkinga, ukuyishicilela, lokho kungabaluleka kakhulu.
Ukwahluka engikuhlolile yi-manjaro sinamoni ne-KDE.
Ngafaka iphrinta ye-xerox phaser 3140 futhi ngabelana ngayo nenethiwekhi enamawindi kepha lapho ngiphrinta ngokwesibonelo amakhophi ama-3 iphrinta ishidi elilodwa noma amanye amakhophi awaphumi manje angazi noma kuzoba inkinga yomshayeli okufanele ihambisane ne-linux noma kuyinkinga enkonzweni yezinkomishi. Leli phutha noma i-bug kwenzeka nge-chakra njengaku-linux mint 14.
URodrigo Sosa kusho
Sawubona, ngiyabonga kakhulu ngokuthatha isikhathi ukuxazulula le nkinga. Iqiniso ukuthi ngangihamba nge-Intanethi isigamu sosuku. Ngiyabonga. Kuxazululiwe
Phendula uRodrigo Sosa
U-Elav wami othandekayo, bengizama ukuphrinta nge-HP LJ 1000 ku-Ubuntu 12.04, ngibonile ukuthi lukhulu kangakanani usizo oluvela kuma-WEB futhi angikazuzi lutho, kufaka phakathi okuvela esihlokweni esashicilelwa kule sayithi kungekudala nge-CUPS, Ungangisiza? Sengivele ngiphelelwe yithemba futhi yimina ngedwa emnyangweni osebenzisa iLinux ngifuna ukukhombisa ukuthi ngalolu hlelo izinto zifezekiswa ngokungafani neWindows, ake ucabange ukuthi le phrinta ayinakho ukwesekwa kweWindows 7 no-8, ngakho-ke kuyinkinga yokuhlonishwa I-Linux ifakazela ukuthi ingakwazi. Ucabangani?
Ama-Graciaaaaaaaas, ngigcine ngikwenze ngeDeskjet 710c! Uphase.
Kusebenzile, ngiyabonga kakhulu.
Ngibonga kakhulu ngale ndatshana, bekuyilokho kanye ebengikufuna futhi ngenxa yesixazululo sakho sikwazile ukusetha iphrinta khona lapho. Abantu abathatha isikhathi sabo ukubhala lolu hlobo lwe-athikili yezobuchwepheshe benza lo mhlaba wesoftware yamahhala utholakale kalula nsuku zonke ezikhungweni nasemphakathini jikelele.
Ukunikela okuhle kakhulu futhi kungisebenzele kepha ngemibuzo yokuthi UMA angikwazi ukugcina iphasiwedi kumbhalo osobala, noma yisiphi esinye isixazululo sale nkinga?
U-Antonio Sanchez kusho
I-athikili enhle kakhulu, kepha nginombuzo ... lokhu kuvumelekile kumawindows 10?. Lokho wukuthi, ngiyazama ukwenza okufanayo kodwa ngephrinta exhunywe kwi-windows 10 pc futhi ihlala icela ukuqinisekiswa. Yize ngifaka igama lomsebenzisi nephasiwedi isikhathi ngasinye, ayikwamukeli futhi ayiphrinti
Phendula u-Antonio Sánchez
Umsebenzi we-2013 nowe-Linux